Wasiirka Arrimaha Dibadda Denmark oo Booqasho ku yimid Muqdisho - Awdinle Online
Wasiirka Arrimaha Dibadda Denmark oo Booqasho ku yimid Muqdisho
November 06, 2019 (Awdinle Online) – Wasiirka Arrimaha Dibadda Denmark Jeppe Sebastian Kofod oo maanta booqasho ku yimid dalka ayaa yeeshay kulan looga hadlay iskaashiga iyo xoojinta xariirka soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Denmark taageerada Denmark ee dib-u-kabashada dalka.
Wasiirka oo ka mahad celiyay soo dhaweynta balaaran ee Ra’iisul Wasaaraha iyo qaar ka mid ah Golihiisa Wasiiradda ay u sameeyeen ayaa sheegay in iskaashiga labada dowladood uu aad muhiim ugu yahay la dagaalanka xadjirnimada, argagixisada, adkeynta amniga guud ee dalka iyo dhisidda mustaqbal u suurta galinaya dhalinyarada inay helaan shaqooyin iyo fursado dhaqaale iyo in caruurta Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho.
Sida lagu sheegey qoraal kasoo baxay xafiiska Kheyre, Jeppe Sebastian Kofod ayaa sidoo kale bogaadiyay “horumarka ay dowladdu ka gaartay dhismaha hey’adaha dowladeed iyo qorshaha dib u qaabeynta iyo dadaalkeeda la dagaallanka argagaxisada, iyo dhismaha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.”
Wasiirku Waxa uu cadeeyay in Dowladda Denmark ay ka go’antahy in Soomaaliya ay ku sii garab taagnaato taageerada dhinacyada xasilinta, soo celinta amniga, ganacsiga iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha.
Xasan Cali Khayre oo dowladda Denmark uga mahad celiyay taageereeda joogtada ah ee dib u dhiska iyo kobcinta dowladnimada Soomaaliya, ayaa dhankiisa sheegay in Soomaaliya ay ka go’antay xoojinta iskaashiga iyo xoojinta xariira qotada dheer ee labada dowladood.
Previous articleGen Peter Elwelu visits Uganda contingent in Somalia
Next articleGuddiga farsamada & dhisida Galmudug oo War soo saaray